How can you know your baby has hearing problem? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သငျ့ကလေးမှာ အကွားအာရုံခြှတျယှငျးမှူရှိနတေယျဆိုတာ ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ
သငျ့ကလေးရဲ့ အကွားစှမျးရညျဟာ သူ့သငျယူနိုငျမှူအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ အခွခေံအုတျမွဈဖွဈပါတယျ..။ ဆရာဝနျတှေ… ကြှမျးကငျြသူတှေ စကျနဲ့ စမျးသပျပေးခွငျး( hearing screening) ကနေ… သငျ့ကလေးအကွားအာရုံပုံမှနျဟုတျမဟုတျ သိနိုငျသလို …. ကလေးကိုစောငျ့ရှောကျသူ ဒါမှမဟုတျ ကလေးမိဘတှကေလညျး အကွားအာရုံ ပုံမှနျရှိမရှိ ရိပျမိသိစနေိုငျတဲ့ လက်ခဏာတှရှေိပါတယျ..။
ကလေးတဈယောကျ အကွားအာရုံပုံမှနျမဟုတျဘူးဆိုတာ ပွသတဲ့ လက်ခဏာတှကေ ကလေးတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ မတူကှဲပွားနိုငျသလို ဘယျလောကျထိ နားမကွားသလဲ ဆိုတဲ့ အခွအေနအေတိုငျးအတာတှကေလညျး တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျကှာခွားနိုငျပါတယျ…။
ဒါပမေယျ့ အောကကျမှာဖျောပွမယျ့ လက်ခဏာတှထေဲက တဈခုခုရှိနရေငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပွသဖို့လိုအပျပါလိမျ့မယျ..။
ရုတျတရကျ ကယျြလောငျတဲ့အသံကွားရငျ လနျ့မသှားခွငျး
သီခငျြးသံ..စကားပွောသံ စတဲ့အသံတှကေို တုနျ့ပွနျမှူမရှိခွငျး
အသံကယျြကယျြကွားပမေယျ့ မနိုးဘဲ ဆကျအိပျနခွေငျး
အသကျနှဈလအရှယျမှာ “အိုး” “ အဲ့” စတဲ့ အသံမထှကျခွငျး
အသကျနှဈလအရှယျမှာ ရငျးနှီးတဲ့အသံတှေ (ဥပမာ မိခငျအသံ) တှနေဲ့ ခြော့မွှူရငျ ငွိမျမသှားခွငျး
အသံလာရာကို ကလေးရဲ့ခေါငျးလှညျ့မလာခွငျး ဒါမှမဟုတျ လှညျ့မကွညျ့ခွငျး
ကလေးတိတျတဆိတျငွိမါသကျနတေဲ့အခြိနျမှာ ဆူညံသံ ဒါမှမဟုတျ အသံတဈခုခုပေးရငျ မကျြနှာအပွောငျးအလဲမရှိခွငျး
ဂြောကျဂကျြ.. ပိပိ… စတဲ့ ညှဈရငျ လှူပျရငျအသံမွညျတဲ့ ကစားစရာမြားကို ကစားရတာပြျောရှငျစိတျဝငျစားပုံမရခွငျး
တုနျခါမှူပါတဲ့အသံမြိူး (ဥပမာ Ph သံ) လိုမြိူးကိုသာ အာရုံစိုကျပွီး အသံသကျသကျဆိုရငျ အာရုံစိုကျမှူမရှိခွငျး
ဘူးမှူတျတဲ့အခါ အသံနအေသံထား အနိမျ့အမွငျ့ပွောငျးလဲမှူမရှိခွငျး
သီခငျြးသံကို တုနျ့ပွနျမှူ စိတျဝငျစားမှူမရှိခွငျး
အသကျတဈနှဈအရှယျတှငျ မမေေ ဖဖေေ စသညျ့နှဈလုံးတှဲစကားမြား မပွောခွငျး
အသုံးမြားသောစကားလုံးမြား.. ဥပမာ တာ့တာ .. ကို နားမလညျခွငျး
ဒီလိုမြိူး ကွုံတှရေ့ပွီဆိုရငျတော့ သငျ့ကလေးငယျမှာ တကယျပဲအကွားအာရုံခြှတျယှငျးမှူရှိမရှိကို သကျဆိုငျရာဆရာဝနျနဲ့ပွသပွီး သခြောစဈဆေးသငျ့ပွီ ဖွဈပါတယျ….။
သင့်ကလေးမှာ အကြားအာရုံချွတ်ယွင်းမှူရှိနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
သင့်ကလေးရဲ့ အကြားစွမ်းရည်ဟာ သူ့သင်ယူနိုင်မှူအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်..။ ဆရာဝန်တွေ… ကျွမ်းကျင်သူတွေ စက်နဲ့ စမ်းသပ်ပေးခြင်း( hearing screening) ကနေ… သင့်ကလေးအကြားအာရုံပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် သိနိုင်သလို …. ကလေးကိုစောင့်ရှောက်သူ ဒါမှမဟုတ် ကလေးမိဘတွေကလည်း အကြားအာရုံ ပုံမှန်ရှိမရှိ ရိပ်မိသိစေနိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေရှိပါတယ်..။
ကလေးတစ်ယောက် အကြားအာရုံပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြသတဲ့ လက္ခဏာတွေက ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကွဲပြားနိုင်သလို ဘယ်လောက်ထိ နားမကြားသလဲ ဆိုတဲ့ အခြေအနေအတိုင်းအတာတွေကလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကွာခြားနိုင်ပါတယ်…။
ဒါပေမယ့် အောကက်မှာဖော်ပြမယ့် လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုရှိနေရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြသဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်..။
ရုတ်တရက် ကျယ်လောင်တဲ့အသံကြားရင် လန့်မသွားခြင်း
သီချင်းသံ..စကားပြောသံ စတဲ့အသံတွေကို တုန့်ပြန်မှူမရှိခြင်း
အသံကျယ်ကျယ်ကြားပေမယ့် မနိုးဘဲ ဆက်အိပ်နေခြင်း
အသက်နှစ်လအရွယ်မှာ “အိုး” “ အဲ့” စတဲ့ အသံမထွက်ခြင်း
အသက်နှစ်လအရွယ်မှာ ရင်းနှီးတဲ့အသံတွေ (ဥပမာ မိခင်အသံ) တွေနဲ့ ချော့မြှူရင် ငြိမ်မသွားခြင်း
အသံလာရာကို ကလေးရဲ့ခေါင်းလှည့်မလာခြင်း ဒါမှမဟုတ် လှည့်မကြည့်ခြင်း
ကလေးတိတ်တဆိတ်ငြိမါသက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆူညံသံ ဒါမှမဟုတ် အသံတစ်ခုခုပေးရင် မျက်နှာအပြောင်းအလဲမရှိခြင်း
ဂျောက်ဂျက်.. ပိပိ… စတဲ့ ညှစ်ရင် လှူပ်ရင်အသံမြည်တဲ့ ကစားစရာများကို ကစားရတာပျော်ရွှင်စိတ်ဝင်စားပုံမရခြင်း
တုန်ခါမှူပါတဲ့အသံမျိူး (ဥပမာ Ph သံ) လိုမျိူးကိုသာ အာရုံစိုက်ပြီး အသံသက်သက်ဆိုရင် အာရုံစိုက်မှူမရှိခြင်း
ဘူးမှူတ်တဲ့အခါ အသံနေအသံထား အနိမ့်အမြင့်ပြောင်းလဲမှူမရှိခြင်း
သီချင်းသံကို တုန့်ပြန်မှူ စိတ်ဝင်စားမှူမရှိခြင်း
အသက်တစ်နှစ်အရွယ်တွင် မေမေ ဖေဖေ စသည့်နှစ်လုံးတွဲစကားများ မပြောခြင်း
အသုံးများသောစကားလုံးများ.. ဥပမာ တာ့တာ .. ကို နားမလည်ခြင်း
ဒီလိုမျိူး ကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ သင့်ကလေးငယ်မှာ တကယ်ပဲအကြားအာရုံချွတ်ယွင်းမှူရှိမရှိကို သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီး သေချာစစ်ဆေးသင့်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်….။